Tsamba yaJakobho 5:1-20
Yambiro kuvapfumi (1-6)
Mwari anokomborera vanoramba vachitsungirira (7-11)
“Hongu” wenyu ngaave hongu (12)
Munyengetero unopiwa nekutenda une simba (13-18)
Kubatsira mutadzi kuti adzoke (19, 20)
5 Inzwai imi vapfumi, chemai muridze mhere nemhaka yematambudziko achakuwirai.+ 2 Pfuma yenyu yaora, uye nguo dzenyu dzadyiwa nezvitemamachira.*+ 3 Goridhe renyu nesirivha yenyu zvapera nengura, uye ngura yazvo ichapupurira kuti mune mhosva uye ichadya nyama yenyu. Zvinhu zvamakaunganidza zvichaita semoto mumazuva ekupedzisira.+ 4 Mibhadharo yamakanyima vashandi vakakohwa minda yenyu iri kuramba ichishevedzera, uye kuchema kwevakohwi vachikumbira kubatsirwa kwasvika munzeve dzaJehovha* wemauto.+ 5 Makararama upenyu hweumbozha uye maiita zvekungofadza nyama yenyu panyika. Makadya mukakora muchimirira zuva rekuurayiwa kwenyu.+ 6 Makapa mhosva munhu akarurama uye makamuuraya. Iye haasi kukushorai here? 7 Saka hama rambai muchimirira nemwoyo murefu kusvikira pakuvapo kwaShe.+ Fungai nezvemurimi uyo anoramba achimirira zvibereko zvinokosha zvevhu, anozvimirira nemwoyo murefu kusvikira mvura yekutanga nemvura yekupedzisira yanaya.+ 8 Nemiwo ivai nemwoyo murefu;+ simbisai mwoyo yenyu, nekuti kuvapo kwaShe kwava pedyo.+ 9 Hama, musagunun’unirana* kuti murege kutongwa.+ Onai! Mutongi akatomira pasuo. 10 Hama, fungai nezvevaprofita vakataura muzita raJehovha*+ motevedzera muenzaniso wavo wekutsungirira matambudziko+ uye kuva nemwoyo murefu.+ 11 Tinoti vanofara* vaya vakatsungirira.+ Makanzwa nezvekutsungirira kwaJobho+ uye makaona zvaakazoitirwa naJehovha,*+ kuti Jehovha* ane tsitsi huru uye ane ngoni.+ 12 Asi kupfuura zvese hama dzangu, regai kupika nedenga kana nenyika kana kuita chero imwe mhiko. Asi “Hongu” wenyu ngaave hongu, uye “Kwete,” wenyu, kwete,+ kuti murege kutongwa. 13 Pakati penyu pane ane dambudziko here? Ngaarambe achinyengetera.+ Pane ari kufara here? Ngaaimbe mapisarema.+ 14 Pakati penyu pane anorwara here? Ngaashevedze vakuru+ veungano, uye ngavamunyengeterere vachimuzora+ mafuta muzita raJehovha.* 15 Munyengetero unopiwa nekutenda uchaporesa murwere wacho,* uye Jehovha* achamusimbisa. Uyewo kana aine zvivi zvaakaita, acharegererwa. 16 Saka reururai muchiudzana zvivi zvenyu+ pachena uye nyengetereranai kuti muporeswe. Kuteterera kwemunhu akarurama kune simba.*+ 17 Eriya aingovawo munhu sesu, asi paakanyengetera nemwoyo wese kuti kusanaya, mvura haina kunaya munyika yacho kwemakore matatu nemwedzi 6.+ 18 Akanyengeterazve, denga rikanayisa mvura, nyika yacho ikabereka.+ 19 Hama dzangu, kana pakati penyu pakava neanotsauswa pachokwadi, mumwe omudzora, 20 zivai kuti munhu anodzora mutadzi panzira yake yekukanganisa+ achamuponesa* parufu uye achafukidza zvivi zvizhinji.+
^ Utwu tuzvipembenene tunodya machira.
^ Kana kuti “musanyunyutirana.”
^ Kana kuti “vakakomborerwa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “munhu anenge akaneta.”
^ ChiGir., “kune simba guru pakunenge kuchishanda.”
^ Kana kuti “achaponesa mweya wake.”